लमजुङमा बर्सेनी सुन्तला उत्पादन किन घट्दैछ ? - Radio Bhotewodar
लमजुङमा बर्सेनी सुन्तला उत्पादन किन घट्दैछ ?
रेडियो भोटेओडार १२ पुष २०७६, शनिबार १४:२२ मा प्रकाशित ( २ साल अघि) २४८४४ पाठक संख्या
लमजुङ–लामो समयदेखी सुन्तला खेतीमा लाग्नुभएका किसान हुनुहुन्छ, लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका–१, ठूलो धिमिरेका विष्णुप्रसाद पन्त । उहाँ २०४८ सालदेखी सुन्तला खेतीमा लाग्नुभएका हो ।
४ रोपनी जग्गाबाट सुन्तला खेती सुरु गर्नुभएका पन्तले पछि ८ रोपनी जग्गामा सुन्तला खेती बिस्तार गर्नुभयो । विगतमा सुन्तला खेतीबाट राम्रै कमाइ भएको थियो । यसैबाट सजिलै गुजारा चलेको थियो । तर पछिल्ला केही वर्षदेखी सुन्तला उत्पादन घट्दै गएकोमा उहाँ निराश हुनुहुन्छ ।
‘अहिले सुन्तलाका बोट मर्दै गएको छ । उत्पादन घट्दो छ । कमाइ पनि घट्दो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विगत केही वर्षअघिसम्म सुन्तला बिक्रीबाट २ लाखसम्म कमाइ हुन्थ्यो । यसवर्ष सुन्तला बिक्रीबाट १३ हजार रुपैयाँमात्र कमाइ भयो ।’
‘बर्सेनी सुन्तला उत्पादन घट्दो छ । जमिन बाँझो राख्नुभएन । बिस्तारै सुन्तला खेतीलाई प्रतिस्थापन गर्दै केरा, कागती खेती सुरु गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केरा खेतीमा राम्रै कमाइ छ । केरा खेती फस्टाउनेमा आशावादी छु ।’
केही वर्षअघि सुन्तला बेचेर बर्सेनी ९० हजारसम्म कमाइ गर्दै आउनुभएको थियो, बेसीशहर–१, पौडेलगाउँका इन्द्रबहादुर खड्काले पनि । तर अहिले उहाँले लगाएको सुन्तला खेती मासिदैँ गएको छ ।
‘चार रोपनी जग्गामा सुन्तला लगाएको हो । पहिले सुन्तला बेचेर राम्रै कमाइ हुन्थ्यो,’ उहाँले निराशा भावमा भन्नुभयो, ‘पछि बिस्तारै सुन्तलाका बोट मर्दै गए । सुन्तलाका बोट दाउरा बालेर सकिए । अहिले परिवारलाई खान पुग्ने सुन्तला पनि छैन ।’ सुन्तला खेती छोडी अहिले उहाँ व्यवसायिक तरकारी खेतीमा लाग्नुभएको छ ।
उत्पादनसंगै कमाइ घट्दो
ठूलो धिमिरेकै इन्द्रबहादुर पन्तको पीर–व्यथा पनि उस्तै छ । सुन्तला उत्पादक किसान पन्तको उत्पादनसंगै कमाइ पनि बर्सेनी घट्दो छ । ‘विगतमा दुई लाखसम्म सुन्तला बिक्रीबाट कमाइ हुन्थ्यो । पछिल्ला वर्षहरुमा उत्पादन घट्दो छ । कमाइ पनि घटेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सुन्तलाका बोट मर्दै गएको छ । फलेका सुन्तलाको दाना पनि साना छन् । सुन्तला अमिलो छ, रसिलो छैन ।
विगतमा सिजनको बेला लमजुङको चिप्लेटी, रतनपुर, पौडेलगाउँ, सानो धिमिरे, ठूलो धिमिरे, चिती स्याउत लगायतका थुप्रै गाउँ सुन्तलाले पहेँलपुर देखिन्थे । सुन्तला उत्पादन राम्रो हुन्थ्यो । स्थानीयले सुन्तला बिक्रीबाटै लाखौँ कमाउँथे । सुन्तला टिप्नलाई केहीले काम समेत पाउँथे । अहिले भने सुन्तला मासिदैँ गएकाले त्यस्तो अवस्था नरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
उहाँका अनुसार विगत ५÷७ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा जिल्लामा बर्सेनी सुन्तला उत्पादन घट्दै गएको देखिन्छ ।
अन्यत्रबाट सुन्तला आयात
विगतमा देशका काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायतका मुख्य शहरी क्षेत्रमा लमजुङमा उत्पादित सुन्तलाको माग ज्यादा हुन्थ्यो । लमजुङमा उत्पादित ठूलो दानाका साथै रसिला र गुलिया सुन्तला उपभोक्ताको रोजाइँमा पथ्र्यो । त्यसैले सुन्तला किन्नका लागि व्यापारी किसानको सुन्तला बगैँचामै पुग्थे ।
विगतमा ठूलो परिमाणमा अन्यत्र सुन्तला पठाउने लमजुङमा अहिले गोरखा, तनहुँ लगायतका छिमेकी जिल्लाबाट सुन्तला आयात हुँदै आएको छ ।
सुन्तलामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सम्वन्धित निकायले पहलकदमी लिनुका साथै आधुनिक कृषि प्रविधिको उपयोग गरी व्यवस्थित बगैँचा निर्माण गरी उन्नत जातका बिरुवा लगाई सुन्तला खेती गर्न सकिए, सुन्तला खेतीबाटै किसानको आयस्तर उकास्न सकिने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।